Ma Rumaysan Karaan Taageereyaasha Arsenal Waxa Uu Mikel Arteta Ku | Axadle
Arsenal ayuu xilli ciyaareedkeedu ku xidhnaa natiijada kulankii ay xalay niyad-jabka ka qaadeen ee Villarreal ay barbarraha goolal la’aanta ah la galeen, taas oo ay kaga hadheen tartanka Europa League.
Gunners ayaa garoonkeeda ku qaabbishay Villarreal oo lugtii hore kaga soo badisay 2-1, waxaanay kaliya u baahnayd in ay la timaaddo hal gool, si ay dhamaadka bishan ugu safri karto Gdansk oo uu ka dhacayo finalka Europa League oo ay kula ciyaari lahayd Manchester United, laakiin rajadaasi waxay ku beenowday markii ay gool dhalin waayeen.
Mikel Arteta ayaa ku qasbanaaday in uu isbeddel ku sameeyo shaxdii uu shaaciyey ee uu garoonka kusoo gelayay, kaddib dhaawac soo gaadhay Granit Xhaka waqtigii iskululaynta, waxaana kusoo bilowday difaaca bidix Kieran Tierney oo kasoo laabtay dhaawac, si buuxdana aan taam ugu ahayn kulankan.
Kaddib natiijadan, Mikel Arteta ayay kooxdiisu quus ka taagan tahay in tarmada Yurub ay kasoo muuqato xilli ciyaareedka dambe, iyadoo kaalinta sagaalaad kaga jirta horyaalka.
Tababaraha reer Spain ayuu hadda cadaadis badan kaga imanayaa taageereyaasha kooxda oo aan ku qanacsanayn bandhigga kooxdooda ee intii uu shaqada hayay Arteta, waxaase xaaladdoodu isasii beddeshay xalay oo ay u arkeen in aanu lahayn kartidii iyo go’aamadii ay kooxdu guul ku gaadhi lahayd.
Intii ay ciyaartu socotay, Mikel Arteta ayaa qaatay go’aan ka cadhaysiiyey taageereyaasha oo uu ku saaray Pierre-Emerick Aubameyang xilli ay kooxdu raadinaysay gool.
Aubameyang ayaa garoonka laga saaray daqiiqado yar gudahood markii uu faro-ciddidood kaga baxsaday goolka Villarreal iyadoo kubbad uu dhinaca ka keenay Hector Bellerin uu ku qabtay madax, waxyarna ay kubaddu u jirsatay goolka.
Jamaahiirta Arsenal ayaa go’aankan ka cadhooday, waxaanay baraha bulshada ku soo bandhigeen dareenkooda iyagoo qaarkood sheegeen in ay rumaysan kari waayeen waxa uu tababarahoodu sameeyey.
Halkan ka akhriso qaar ka mid ah falcelinta taageereyaasha Arsenal: